Vaovao - palitao
Ny akanjo mando dia vita amin'ny lamba tsy tantera-drano amin'ny lamba tsy tantera-drano, ny lamba azo tanterahina azo ampiharina dia misy kasety, lamba fidiovana ary sarimihetsika plastika, sns.
Niandoha avy any Shina ny palitao. Ao amin'ny Tarana Zhou, ny palitao dia namboarina tamin'ny "petrol" lavanila ho toy ny palitao miaro amin'ny orana. Ity palitao ity dia antsoin'ny olona matetika hoe "Akanjo Rainana". Ny orana maoderina dia mijery ny fahitaran'ny rivotra lamba vita amin'ny rano tsy miova, ary ny akanjo mafana mifoka rivotra mifono rivotra dia mahomby amin'ny famotsorana ny rivotra mafana sy mando avy amin'ny akanjo lava mandritra ny fitafiana, mampitombo ny haavon'ny fampiononana
Niandoha avy any Shina ny palitao. Ao amin'ny Tarana Zhou, palitao orana vita amin'ny "lasantsy" lilla no nampiasaina hiarovana amin'ny orana, lanezy, rivotra ary masoandro. Ity palitao ity dia fantatra amin'ny anarana hoe "Akanjo Rainana". Nanodidina ny vanim-potoana lohataona sy fararano dia namorona palitao lamba menaka ny razana. Ny taona fahafito amby roapolo an'i Ai Gong tao Zuozhuan: "Nanamboatra Jangge tamin'ny fitafiana i Chen Chengzi". Fanamarihan'i Du Yu: "vita, akanjo orana". Nieritreritra i Duan Yucai ao amin'ny Dynasty qing: tsy vita amin'ny ahitra ny fitaovan'ny orana, raha fitafiana lamba menaka ankehitriny. Araka ny fikarohana, tamin'izany fotoana izany, ny olona dia efa nanana ny fahazoana ny zavamaniry maina maina, Ebara, sns., Ilay antsoina hoe lamba menaka, dia ilay lamba misy menaka tung na na menaka choi lamba maina tsy tantera-drano. Taorian'ny Dynasties Avaratra sy atsimo dia nandroso bebe kokoa ny famokarana akanjo mando amin'ny lamba menaka. Azo alamina amin'ny landy na vita amin'ny taratasy cocoon silkworm. Tamin'ny Dinasti Sui, lamba menaka no nanaovana palitao. “Sui Book” dia nitondra ny amperora Yangdi indray mandeha, mahita orana fihazana, “manodidina ny akanjo menaka.” Na izany aza, lafo ny akanjo palitao misy menaka ary sarotra ho an'ny olon-tsotra ny mahazo. Ny aristokraty ihany no afaka mankafy azy ireo. Ao amin'ny Dinam-panjakan'i Tang, ny akanjo mando dia namorona fitambarana palitao sy satroka coir. Ny teny hoe "Yuge Zi" nosoratan'i Zhang Zhihe ao amin'ny Dynasty Tang dia mivaky hoe, "Ruoli Maitso, palitao Coir maitso, tsy misy fiverenana noho ny toetr'andro milentika", izay tena mamaritra ny olona miasa miasa amin'ny akanjo lava. Ka hoy izahay hoe "zhu zhu maitso" sy "palitao maintso", satria izy roa dia vita tamin'ny ravina zavamaniry. Tamin'ny Dinasti tang, nisy palitao vita amin'ny landy. Ao anatin'ny vanim-potoana lava be dia lava, ny palitaon'orana sy ny satroka dia palitao malaza ihany, saingy miaraka amin'ny fivoaran'ny vokatra ara-tsosialy dia tsy mangidihidy intsony izy ireo, fa volontsôkôlà kosa, lasa mihalehibe hatrany amin'ny famokarana. Ao amin'ny Song and Yuan Dynasties, ny palitaon'orana dia ny palman'ny miaramila. Ao amin'ny Dynasties Ming sy Qing, ny olo-manan-kaja dia aleony koa ny palitaon'orana, toa an'i Jia Baoyu ao anaty nofinofy mena mena. Tamin'ny andro orana dia nanao “jade pin rush” niaraka tamin'ny ahitra jade izy, ary “satroka voaloboka volamena” namboarina tamin'ny hoditra voaloboka manify ary nolokoina tamin'ny menaka tung, izay nahaliana ny ankizivavy. Ny palitaon'afo dia namboarina ho akanjo tsy misy orana mandra-pahatongan'ny fisehoan'ny akanjo maoderina plastika vaovao mamela ny mason'ny olona tsikelikely. Saingy any amin'ny faritra be tendrombohitra misy anao dia mbola azonao jerena ny palitaon'orana amin'ny vatan'ny zavamaniry
Tamin'ny 1747, ny injeniera frantsay Francois Freno dia nampiasa latabatra azo tamin'ny hazo vita amin'ny rubber mba hampitsimoka kiraro lamba sy palitao tamin'ity vahaolana latina ity mba tsy ho tantera-drano. Tao amin'ny ozinina fingotra any Ekosy, Angletera, dia nisy mpiasa iray antsoina hoe McGuindos. Indray andro tao amin'ny 1823, niasa i McGuindos raha sendra namoaka vahaolana vita amin'ny fingotra tsy nahy izy teo amin'ny akanjony. Rehefa nahalala izy dia namafa azy haingana tamin'ny tanany, saingy toa niditra tao anaty akanjony ilay ranon-tsolika. Raha tokony hamafa azy dia nopetahany takelaka. Tsy afaka nanala an'io Andriamatoa McGuindos, ka mbola nanaovany azy hiasa. Fotoana fohy talohan'izay dia tsikaritr'i McGuinty fa ny faritra vita amin'ny kodiarana vita amin'ny akanjo dia voasarona amin'ny lakaoly tsy misy rano, endrika ratsy tarehy nefa tsy mety simba. Nosaronany kofehy fotsiny ilay akanjo manontolo, ary akanjo tsy misy orana no vokany. Miaraka amin'ilay akanjo vaovao, McGuinty dia tsy tokony natahotra ny hisian'ny orana intsony. Vetivety dia niparitaka ny zava-baovao, ary ny mpiara-miasa ao amin'ny orinasa dia nanaraka ny fitarihan'i McGuinty ary nanao akanjo palitao vita amin'ny vinyl tsy misy rano. Taty aoriana, ny fitomboan'ny lazan'ilay palitao vita amin'ny tape dia nahasarika ny sain'i Parks, metallurgists anglisy iray, izay nandalina an'io karazan'akanjo manokana io. Hitan'ny valan-javaboary fa ny akanjo vita amin'ny fingotra, na dia tsy mety simba aza, dia mafy sy mora volo, ka tsy mahasarika sy tsy mahazo aina ny mitafy azy. Parks dia nanapa-kevitra ny hanatsara ny akanjo. Tamin'ny 1884 vao namorona sy nanala paty ny teknolojia amin'ny fampiasana karbonina disulfide i Parks ho solvent, mandevona rubber ary manao famatsian-drano. Mba hivadika ho vokatra haingana ilay famoronana dia namidin'ny valan-javaboary tamin'ny lehilahy iray antsoina hoe Charles ny patanty. Raincoats dia nanomboka novokarina betsaka, ary tsy ela dia nanjary nalaza eran'izao tontolo izao ny Charles Raincoat Company. Mackindows, izay nantsoin'ny rehetra hoe ny palitaony, dia tsy hadino. Nanomboka teo dia nanjary fantatra tamin'ny teny anglisy hoe "Mackintosh" ny teny hoe "palitao". Taorian'ny nidirana tamin'ny taonjato faha-20, ny fisehoan'ny plastika sy ny lamba tsy tantera-drano isan-karazany dia nahatonga ny fomba sy ny lokon'ny akanjo lava mando sy manankarena. Taorian'ny taona 1960, nanjary nalaza be ny palitaon'orana namboarina avy tamin'ny lambam-baravarankely na akanjo orana voatsabo